Soo dejisan Tango 3.14.134034 – Android – Vessoft
Webcams, Isgaarsiinta Voice
Nidaamka Operation: Android, Windows
Tango Software la xiriira:
Webcams Isgaarsiinta Voice Tool isgaarsiinta u dhexeeya dadka isticmaala oo dunida ah. Software waxay kuu ogolaanaysaa inaad in ay is dhaafsadaan fariimaha qoraalka ah ama sameyso wicitaano cod iyo video.
العربية, English, Українська, Français... WeChat 6.2.5.52
Chat Isgaarsiinta Voice Webcams Macmiilku waxa uu xor ah in ay is dhaafsadaan fariimaha qoraalka iyo codka. Sidoo kale waxa ay taageertaa isgaarsiinta video iyo is-weeydaarsiga xogta kala duwan.
العربية, English, Українська, Français... Skype 6.2.0.17000
Webcams Isgaarsiinta Voice Software A caan ah oo isgaarsiinta codka lacag la'aan ah iyo is-dhaafsiga ee fariimaha qoraalka ah ee u dhexeeya dadka isticmaala ku. Sidoo kale software awood u yeeran ee telefoonada gacanta iyo kan guriga ee canshuuraha wanaagsan.
English, Українська, Français, Español... Viber 5.5.2.28
العربية, English, Українська, Français... imo 9.4.1
Chat Isgaarsiinta Voice Webcams Codsiga fariin iyo isgaarsiinta codka. Sidoo kale waxaa suurogal ah ee chat saaxiibada ka soo adeegyada kala duwan iyo shabakadaha bulshada.
العربية, English, Українська, Français... Hangouts 4.0.100406486
Network Bulshada Isgaarsiinta Voice Webcams Ninkii wargeeyska ahaa wuu caanka ah ee isgaarsiinta qoraalka, codka iyo muuqaalka ah. Sidoo kale software falgalka uu la codsiyada ugu badan ka adeega Google caan ah.
العربية, English, Українська, Français... Snapchat 9.15.1
Webcams Chat Qalab ku haboon isgaarsiinta iyo wadaagidda macluumaadka. Feature ugu weyn ee software-ka waa awooda u soo dirto sawiro in baaba'aan muddo kaddib.
العربية, English, Українська, Français... KakaoTalk 5.3.3
Webcams Isgaarsiinta Voice Tool si ay ula xiriiraan dadka dunida ku. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad u sameyso wicitaano cod ama video ee tayo sare leh iyo fariimo ay isdhaafsadaan ah.
العربية, English, Українська, Français... Camfrog 5.0.5007
Webcams Ayaa caan video chat si ay ula xiriiraan dadka isticmaala ee adduunka oo dhan. Software wuxuu kuu ogol yahay in aad ku joogto isku mar dhowr qolal chat iyo xiriiro hab ka mid ah muuqaal ah.
Streaming video Tool si aad u eegto oo baahin qulqulaya video. Software ayaa awood u oggolaanayaa in ay boostada iyo comments ama abuuro doorashada.
Emulators Emulator The dhamaystiran oo kulan Console Sony Playstation waa ka ciyaari kara kulamada caan ah oo ku saabsan qalabka Android.
العربية, English, Українська, Français... CCleaner 1.14.55
Ayna System Fududahay in la isticmaali codsiga si aad u nadiifiso oo ay tayadoodii nidaamka qalabka. Software wuxuu taageeraa tiro ka mid ah qalabka si ay ula socdaan xaaladda nidaamka iyo saxo qaladka.
العربية, English, Українська, Français... VirCities 3.1
Games ciyaarta istaraatijiyad A la aasaaska ah ee Aadan Qabille oo a nolosha. Ujeedada ugu weyn ee kulanka ayaa ah in waddada adiga kuu gaar ah goolka la doonayo si walba la heli karo.
English, Français, Deutsch, Русский... Waze 3.9.6.0
Maps Network Bulshada Software navigation oo u shaqeeya mabda'a network bulshada si ay ula socdaan wadada dhacdooyinka kala duwan ee waqtiga dhabta ah.
Clean Master 5.12.1